Athina Studio - I-Airbnb
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Sep 17.
Amakamelo e-Oasis atholakala edolobhaneni elihle laseKardakata. Iphuzu lesu eliseduze kakhulu nazo zonke izindawo ezikhangayo zase-Kefalonia- elilungele ukuvakasha kwesiqhingi.
I-Agia kiriaki, 9 ', i-jem yangempela efihliwe lapho ungavakashela khona amabhishi angenalutho ngesikebhe. Ibhishi lasePetani, 19 ', linokubuka kokushona kwelanga okumangalisayo.Zombili izinhliziyo zesiqhingi i-Argostoli ne-Lixouri ziqhele ngamaminithi angu-20'. Ivuliwe kusukela ngo-2016, siyajabula ukuba yingxenye yolwazi lwakho.
I-Studio Athina isezingeni eliphansi lendlu. Lesi situdiyo sinemibhede emibili eyodwa, i-TV yahlala, ifriji kanye netafula lokudlela, i-air-conditioning ne-WiFi yamahhala. Izinsiza ezijwayelekile zale ndawo zihlanganisa i-swimming pool, indawo yokubhukuda, ama-sunbeds kanye nezambulela.
Azikho izinto zokuhamba zomphakathi ezisuka esikhumulweni sezindiza noma inhloko-dolobha ukuya edolobhaneni laseKardakata. Kuzodingeka imoto noma isikuta ukuze uvakashele izindawo ezikhangayo zesiqhingi, izindawo zokudlela zasendaweni kanye nemakethe encane eseduze (6 'shayela uye edolobhaneni eliseduze lase-Agonas). Izindawo zokudlela eziseduze zasendaweni ezinikeza ukudla kwasendaweni nezitsha zezinhlanzi ziqhele ngebanga eli-4 'kuya kwengama-7' ukushayela imizuzu.